बुधवार यी १० उपायहरू गर्नुहोस्, इच्छा पूरा हुनेछ ! -
२०७७, १४ श्रावण बुधबार ००:४७ July 29, 2020 clickonLeaveaComment on बुधवार यी १० उपायहरू गर्नुहोस्, इच्छा पूरा हुनेछ !
बुधवार गणेशलाई समर्पित छ। प्रथम पूज्य गणेश जी आफ्नो भक्तहरुलाई अनं‍‍त सुख र अपार धन-वैभव प्रदान गर्नुहुन्छ।यस दिन मानिसहरूले गणेश जी को ब्रत गर्छन। साथै उनको पूजा गर्छन्। यस दिन पूजा गर्नु धेरै लाभदायक मानिन्छ। यदि तपाईंले गणेशको पूजा गर्ने क्रममा केहि विशेष चीजहरूको ख्याल राख्नुभयो भने तपाईंले शुभ परिणाम पाउनुहुनेछ।
मान्यता अनुसार यदि कुनै व्यक्तिको काममा अवरोध वा अवरोध आएको छ भने, सबै अवरोधहरू साँचो मनले गणेशको पूजा गरेर दुर हुन्छ। आज हामी हाम्रा पाठकहरुलाई गणेश जीको पूजा र १० वटा उपाय र बुधबार गर्नु पर्ने कुरा बताउँदैछौं जुन तपाईको लागि धेरै लाभदायक साबित हुन सक्छ।
१- पहिलो पूज्य गणेशलाई गुड़ र धनियाको भोग अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। क्षमता अनुसार, तपाइँ प्रसादको रूपमा मोदक वा लड्डू पनि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
२- गणपति जीलाई दुर्वा चढाएमा पनि फाइदा हुन्छ।
३- यदि तपाईंले खसेको तुलसीको पात खानुभयो भने यो पनि लाभदायक हुन्छ।
४- जब तपाईं यस दिनमा बाहिर जानुहुन्छ, सौंफ खाएर बाहिर जानुहोस्।
५- हरियो रुमाल सँगसँगै राख्नु राम्रो हुन्छ। हरियो रंग बुधवार मा शुभ छ।
६- यस दिन हरियो लुगा लगाउनु राम्रो हो।
७- बुधवारको दिन, मन्त्र जाप ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम: को भोग को जप गर्नु शुभ मानिन्छ ।
८- बुधवारको दिन १०८ पटक ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नम: मन्त्र जप गर्नुहोस्।
९- बुधबार तपाईले आफ्नो क्षमता अनुसार मुगको दाल र तामाको वस्तु दान गर्न सक्नुहुन्छ।
१०-बुधसँग सम्बन्धित रोगहरूबाट छुटकारा पाउन रातमा एउटा तामाको भाँडोमा पानी भर्नुहोस्। बिहान त्यही पानी पिनुहोस्।
वर्षा सिजनमा छाला हेरचाहकोलागि उपयोगि टिप्स
मंगलवार हनुमान जि को साधना कसरी गर्ने ! जानौ नियम
२०७६, १७ भाद्र मंगलवार ००:११ September 3, 2019 clickon
प्राण त्याग्ने बेला राधाले भगवान कृष्ण संग अन्तिम ईक्षा के मागीछन?
२०७५, ३१ आश्विन बुधबार ०३:१६ October 17, 2018 clickon
शनि बिग्रेको छ ! शनिदेवको यसरी गरौ पूजा मिल्नेछ आशीर्वाद
२०७५, ४ फाल्गुन शनिबार १२:२१ February 16, 2019 clickon